25% 25 को लागि अतिरिक्त जानकारी - को रूप मा तपाईं गेमबुकर्स क्यासिनो मा क्यासिनो मा छ!
यहाँ तपाइँको लागि एक उदाहरण छ: बोनस कोड प्रयोग गरेर जम्मा गर्नुहोस् र शीर्षमा, तपाइँले एक बोनसको रूपमा तपाइँको जम्मा राशिको 25% प्राप्त गर्नुहुनेछ (अधिकतम EUR 25 सम्म)। त्यसोभए तिमी फेरि त्यहि काम गर्छौ। र फेरि। र फेरि ... केवल असीमित। प्रत्येक बिहिवार 00: 00 (CEST) बाट 23: 59 (CEST) सम्म सम्पूर्ण दिनको लागि!
EUR 25 सम्म तपाईले चाहानु भएको जतिसम्म 25% बोनस प्राप्त गर्नुहोस्!
प्रत्येक बिहिवार, बोनस कोड प्रयोग गरेर जम्मा गर्नुहोस् 25UNLIMITED र तपाइँले तपाइँको जम्मा 25% प्राप्त गर्नुहुनेछ बोनसको रूपमा (अधिकतम EUR 25 सम्म)। त्यसोभए तिमी फेरि त्यहि काम गर्छौ। र फेरि। र फेरि ... केवल पूरा दिनको लागि असीमित!
यहाँ असीमित बोनस दावी कसरी गर्ने:
गेम बुकर क्यासिनोमा लग इन गर्नुहोस्।
न्यूनतम € 50 जम्मा गर्नुहोस्
बोनस कोड प्रयोग गर्नुहोस् 25UNLIMITED 00: 00 (CET) बाट 23: 59 (CET) मा बिहिबार तपाईले बनाउनुहुने प्रत्येक निक्षेपका लागि।
25% अतिरिक्तको साथ खेल्नुहोस्।
25% 25 को लागि अतिरिक्त जानकारी - को रूप मा तपाईं गेमबुकर्स क्यासिनो मा क्यासिनो मा छ! अपडेट गरिएको: जुन 23, 2019 लेखक: Damon
सम्बन्धित बोनस "२%% अतिरिक्त यूरो २UR सम्म - जुन तपाई खेल क्यासिनोमा क्यासिनोमा चाहानुहुन्छ!":
यूरो 1965 कुनै जम्मा कैसीनो बोनस छैन
£ 3490 जम्मा कैसीनो बोनस छैन
"२%% बढि EUR २ TO सम्म खेल्न सुरु गर्नुहोस् - जसरी तपाईं गेसबुक बुस क्यासिनोमा क्यासिनोमा चाहनुहुन्छ।"
25% अतिरिक्त माथि ...